Iimeko ngokubanzi | Law & More B.V.
Ngathi » Iimeko Eziqhelekileyo
1. Law & More B.V., esekwe e-Eindhoven, eNetherlands (emva koku ebizwa ngokuba yi “Law & More”) Yinkampani enamatyala athile, esekwe phantsi komthetho waseDatshi ngenjongo yokuziqhelanisa nomsebenzi wobugqwetha.
2. Ezi meko zibanzi zisebenza kuzo zonke izabelo zabaxumi, ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela ngokubhala ngaphambi kokuqukunjelwa komsebenzi. Ukusebenza kweemeko zokuthenga ngokubanzi okanye ezinye iimeko eziqhelekileyo ezisetyenziswa ngumxumi akubandakanywa ngokucacileyo.
3. Zonke izabelo zabathengi ziya kwamkelwa ngokukodwa kwaye ziya kwenziwa Law & More. Ukusetyenziswa kwenqaku le-7: 407 umhlathi 2 IKhowudi yeDatshi yaseMelika ayifakwanga ngokucacileyo.
4. Law & More enze imisebenzi ngokuhambelana nemigaqo yokuziphatha yoMbutho waseDatshi kwaye, ngokuhambelana nale mithetho, athembisa ukungadaluli naluphi na ulwazi olunikezwe ngumthengi malunga nesabelo.
5. Ukuba unxulumene nemisebenzi oyabelweyo Law & More iqela lesithathu kufuneka libandakanyeke, Law & More Uya kudibana nomthengi kwangaphambili. Law & More ayinaxanduva lokusilela kolunye uhlobo lwalo mntu wesithathu kwaye unelungelo lokwamkela, ngaphandle kothethwano olubhaliweyo lwangaphambili kunye egameni lomthengi, isithintelo esinokubakho soxanduva kwicala lesithathu elibandakanyekayo Law & More.
6. Lonke uxanduva lukhawulelwe kwisixa esiya kuhlawulelwa ityala elithile phantsi kweinshurensi yemfanelo yobuchule Law & More, yonyuswe ngokungaphezulu kwemali ebekiweyo. Xa, nangasiphi na isizathu, kungekho ntlawulo yenziwayo phantsi kweinshurensi yobutyala bobuchwephesha, naluphi na uxanduva lunikwe umyinge we- € 5,000.00. Ngesicelo, Law & More inokubonelela ngolwazi malunga (nokugubungela phantsi) kweinshurensi yemfanelo yobuchule njengoko ithathiwe Law & More. Umthengi ufumana iziqinisekiso Law & More kwaye ibambe Law & More engenabungozi ngokuchasene namabango amaqela esithathu ngokunxulumene nesabelo.
7. Ukwenza umsebenzi owabelweyo, umxhasi uyakutyala Law & More umrhumo (kunye ne-VAT). Umrhumo ubalwa ngokusisiseko senani leeyure ezisebenziweyo ziphindwe ngenani leeyure ezisebenzayo. Law & More ugcina ilungelo lokuhlengahlengisa amaxabiso akhe ngeyure.
8. Izichaso zexabiso le-invoice kufuneka ikhuthazwe ngokubhala kwaye ingeniswe kuyo Law & More Ngeentsuku ezingama-30 emva komhla we-invoice, ukusilela apho i-invoice iya kwamkelwa ngokuqinisekileyo kwaye ngaphandle koqhanqalazo.
9. Law & More iphantsi komthetho i-Dutch Anti-Money Laundering kunye ne-Anti-Terrorist Financing Act (Wwft). Ukuba isabelo siwela ngaphakathi komgangatho weWwft, Law & More Uya kuqhuba umthengi ngenkuthalo efanelekileyo. Ukuba (okwenzelwe) ukuthengiselana ngokungaqhelekanga ngaphakathi komxholo weWwft kuyenzeka, emva koko Law & More unyanzelekile ukuba ayakuxela le yunithi yeDutch Intelligence Unit yaseDatshi. Iingxelo ezinjalo azichazwanga kumthengi.
10. Umthetho waseDatshi usebenza kubudlelwane phakathi Law & More kunye nomthengi.
11. Kwimeko yengxabano, inkundla yase-Datshi e-Oost-Brabant iya kuba negunya, ekuqondeni ukuba Law & More Ihlala inelungelo lokungenisa iimpikiswano kwinkundla ezinokuthi zibe negunya ukuba olu khetho lweforum belungenakwenziwa.
12. Nawuphi na amalungelo abathengi enza amabango ngokuchasene Law & More, uya kuphulukana nawo nawuphi na umsitho kunyaka omnye emva komhla athe umthengi wazi okanye anokwazi ukuba ubukhona beli lungelo.
13. Ii-invoice ze Law & More Iya kuthunyelwa kumthengi nge-imeyile okanye ngeposi eqhelekileyo kwaye intlawulo kufuneka yenzeke ngeentsuku ezili-14 emva komhla we-invoice, ukusilela ukuba yeyiphi inkulumbuso ngokusesikweni kwaye inyanzelekile ukuba ihlawule inzala eyi-1% ngenyanga, ngaphandle kwesaziso esisesikweni . Umsebenzi owenziwe ngu Law & MoreIintlawulo zethutyana zinokufakwa kwi-invoyisi nangaliphi na ixesha. Law & More Unelungelo lokucela intlawulo kwangaphambili. Ukuba umxhasi akasilele ukuhlawula ii-invoice kwangexesha Law & More Unelungelo lokunqumamisa umsebenzi wakhe kwangoko, ngaphandle kokunyanzelwa ukuba ahlawule nawuphi na umonakalo obangelwe oko.